SBS Language | नयाँ युगका सङ्गीतकारहरूले सङ्गीत दिने मात्र हैन, बजाउन पनि जान्नु पर्‍यो: नवीन के. भट्टराई
नयाँ युगका सङ्गीतकारहरूले सङ्गीत दिने मात्र हैन, बजाउन पनि जान्नु पर्‍यो: नवीन के. भट्टराई
Source: Instagram/Nabin K Bhattarai
नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि नेपाली पप गायनमा सक्रिय रहेका तथा विभिन्न राष्ट्रिय अवार्डहरू जितिसकेका गायक नवीन के. भट्टराई अहिले आफै सङ्गीत र म्युजिक भिडियो सम्पादन गर्छन्। कोरोना महामारी हुन अघि उनको विदेशमा धेरै साङ्गीतिक यात्राहरू हुन्थे भने नेपालभित्रै पनि उनलाई विभिन्न ठाउँहरूमा आयोजकहरूले कार्यक्रमको निम्ति बोलाउने गर्थे। आफू लगायत अरू सङ्गीतकर्मीलाई महामारीले पारेको असरको बारेमा उनले हाम्रो नेपाल संवाददाता गिरीश सुवेदीसँग गरेको कुराकानी।
कोरोना महामारीले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई कस्तो असर परेको छ, र तपाईँले गरिरहनुभएको कार्यक्रमहरूलाई पनि कस्तो असर पर्‍यो?
आजकल सङ्गीतमा दुई किसिमका कलाकार हुन्छन् – रेकर्डिङ गरेर म्युजिक भिडियो बनाउने र प्रत्यक्ष कार्यक्रममा आफ्नो सङ्गीत प्रस्तुत गर्ने। पहिलो किसिमका कलाकारहरू अहिले पनि युट्युब र अनलाइन माध्यमहरूबाट सक्रिय नै छन्। तर हामीजस्तो प्रत्यक्ष सङ्गीत गाउने र आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने कलाकर्मीहरूलाई अलि गाह्रो नै छ। यसको कारण एक त अहिले सामूहिक भेला कम हुने भएर साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूको महत्त्व तथा त्यसमा दर्शकको सहभागिता घटेको छ भने अर्कोतिर सरकारले नै कतिपय ठाउँहरूमा त्यसको आयोजनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
तपाईँले यो समयलाई कसरी उपयोग गर्नुभयो?
मैले यो समयमा नयाँ गीतहरूको रेकर्डिङ गरेँ र म्युजिक भिडियोहरू पनि बनाएँ। आज पनि मेरो एउटा नयाँ गीतको भिडियो सहित रिलिज रहेको छ। आफ्नो गीत र भिडियो नबनाएको धेरै पनि भएको थियो, त्यो काम चाहिँ गरेँ। मेरोलागि यो एउटा प्रत्यक्ष गायनको विकल्प जस्तो पनि भयो।
Instagram/Nabin K Bhattarai
डिजिटल सङ्गीतको माध्यमले नेपालमा अहिले कस्तो पृष्ठभूमि बनेको छ?
डिजिटल माध्यमहरूले सङ्गीतकर्मीहरूलाई सहज त निकै बनाएको छ, तर यसको साथ-साथै अल्छी पनि पारेको छ। अहिलेको नयाँ पुस्ताका कलाकारहरू आफ्नो दैनिक अभ्यास भन्दा पनि सफ्टवेयरको विभिन्न फङ्सन सिक्नमा व्यस्त छन्। अनि यसले एउटै सङ्गीत गीतको एक भागदेखि अर्को ठाउँसम्म 'कपि-पेस्ट' गर्न दिने हुँदा एउटा गीत या सङ्गीत बनाउँदा कलाकारको प्रत्यक्ष मेहनत कम लाग्ने हुनाले यसले धेरैलाई अल्छी बनाएको जस्तो देखिन्छ। तर हुन त प्रविधिलाई कसरी चलाउने भन्न कुरा पनि आउँछ, र यसै पनि यसमा काम गर्दा गीतको क्वालिटी राम्रो त आउँछ नै।
भट्टराईसँगको कुराकानी समेतको रिपोर्ट सुन्नुहोस्:
तपाईँले भर्खरै रिलिज गर्नुभएको गीत र म्युजिक भिडियोहरूको बारेमा केही भनिदिनुस् न?
मैले गत हप्ता 'सम्झिरहन्छु' भन्ने गीत सार्वजनिक गरेको थिएँ। त्यसको सङ्गीतमा मलाई मन पर्ने ब्यान्ड 'पिङ्क फ्लोइड' को प्रभाव देख्न सकिन्छ। यसै गरी शब्दहरू र भिडियोमा कसैलाई याद गरेर सम्झिरहेको सन्दर्भ आउँछ।
आज रिलिज हुन गइरहेको 'खाली यो मनमा' गीतमा भने अलि रमाइलो सन्दर्भ रहेको छ, जसको भिडियो हेर्दा र गीत सुन्दा पनि मुसुक्क हाँस्न मन लाग्ने जस्तो हुन सक्छ दर्शकहरूलाई!
आगामी दिनहरूमा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई कस्तो देख्नु भएको छ?
अहिले खास विश्वमा सङ्गीतसँग सम्बन्धित कुन मोबाइल एप चर्चित छ, त्यसैले नै सबै ठाउँको सङ्गीत क्षेत्रलाई निर्धारण गर्नेछ। अहिले हामीले फेसबुक, युट्युब र टिक-टक मा यसको उदाहरणहरू देखिनै रहेका छौँ। अबको कलाकारहरूले राम्रो र गहन सङ्गीत निकालुन् र यो क्षेत्रको अझै प्रगति होस् जस्तो लाग्छ मलाई।
कोरोना महामारी अगाडी यस क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो र नेपालको सङ्गीत क्षेत्रमा कस्तो प्रगतिहरू हुँदै थिए? तपाईँको करिअर कस्तो भइरहेको थियो?
सबैको राम्रो नै भइरहेको थियो। सबै जना हप्ताभरि नै व्यस्त नै हुने गर्थे। हुन त एकेडेमी हलहरूमा कार्यक्रमहरू हुन छोडेकै करिब ७ वर्ष जति भयो होला। तर लाउन्जहरु र बारहरूमा भने कार्यक्रमहरू भई नै राख्थे। मेरो पनि हरेक हप्ता १-२ वटा कार्यक्रम हुने गर्थे। कोरोनाले गर्दा भने यो ठप्पै भयो। मान्छेहरू भिडभाड गर्ने पाउँदैनन् त्यसैले कार्यक्रम आयोजना त हुनै नै भएन। त्यो बेला बरु सङ्गीत क्षेत्र राम्रै थियो। सिनेमा क्षेत्र पनि राम्रै थियो। अहिले त हलहरू पनि बन्द नै छन् क्यारे। जे होस् महामारीले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई निकै असर गरेको छ। सङ्गीत पठन-पाठनमा पनि यसले धेरै नै असर परेको छ।
आगामी दिनहरूमा सङ्गीतमा लाग्ने हरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र कस्तो तरिकाले लाग्न सकिन्छ होला?
अबको नयाँ युगका सङ्गीतकारहरूले सङ्गीत जानेर मात्र हैन, बजाउन पनि जान्नु पर्‍यो। आफ्नो गीतलाई आफ्नै ल्यापटपमा रेकर्ड गर्न पनि जान्ने हुनुपर्‍यो। यसले गर्दा उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा टिक्न सजिलो हुन्छ। आफ्नो गीतको भिडियो खिच्ने र त्यसको सम्पादन सबै गर्न आउनुपर्‍यो। त्यस बाहेक सामाजिक सञ्जाललाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता पनि चाहियो। गीत गाएर मात्र त अब गाह्रो नै छ जस्तो लाग्छ। त्यसको निम्ति यी सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् आजका युवा सङ्गीतकारहरूलाई।
नेपालमा रोपाइँको बेला कस्ता किसिमका गीतहरू गाइन्छ, थाहा छ?
सिड्नीका नेपाली गायकलाई कोभिडले जुराइदिएको साङ्गीतिक मौका
“भाइरल हुने पछाडि लागेर गीतको आयु नछोट्टाउनुस्” विवेक श्रेष्ठ,कन्दरा ब्यान्ड
प्रेम र कफी बीच अस्ट्रेलियाको आप्रवासी जीवन: निरु त्रिपाठीको 'पेरिस्कानो'
नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र डिजिटल माध्यममा व्यावसायिक बन्दै
बर्तिका राई: प्रवासी जीवनको एक्लोपना र विस्थापनलाई सांगीतिक लयमा बुन्दै
अहिले गीत बनाउँदा कानलाई मात्रै सोचेर हुँदैन, आँखालाई पनि सोच्नुपर्छ: दीपक बज्राचार्य
“न शैली न ढाँचा, यी काँचा बुख्याचा": सुदिन पोखरेलको नयाँ जोश
"बैमानी संसार" मा पत्रकार बाट चर्चित गायक बनेका अनुप ओझा
वर्णमाला गायक: देव आशिष मोथी
सिड्नी गायक राज के गोस्वामीको 'साईँली र माईली पोइल गएछन्'